Hosea 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wobebu Efraim ne Yuda atɛn (1-15)
5 “Asɔfo, muntie;+O Israel fi, monyɛ aso,O ɔhene fifo, muntie,Na atemmu no fa mo ho;Efisɛ moyɛ afiri ma Mispa,Na moyɛ atena* a wɔatrɛw mu agu Tabor so.+ 2 Na wɔn a wɔaman* no, akunkumakunkum* adi wɔn ti,Na merebɔ wɔn nyinaa kɔkɔ.* 3 Minim Efraim,Na Israel nso, m’ani tua no. Na wo, O Efraim, woabɔ aguaman;Israel agu ne ho fĩ.+ 4 Wɔn nneyɛe nti, wontumi nsan mma wɔn Nyankopɔn nkyɛn,Efisɛ aguamammɔ* honhom wɔ wɔn mu;+Na wɔmfa Yehowa nyɛ hwee. 5 Israel ahantan adi adanse atia no;*+Israel ne Efraim nyinaa bɔne ama wɔahintiw,Na Yuda nso ne wɔn ahintiw.+ 6 Wɔde wɔn nguan ne wɔn anantwi kɔhwehwɛɛ Yehowa,Nanso wɔanhu no, Efisɛ na watwe ne ho afi wɔn ho.+ 7 Wɔayi Yehowa ama,+Efisɛ wɔawowo ananafo mma. Enti bosome baako bɛmene wɔne wɔn agyapade* nyinaa.* 8 Mommɔ abɛn+ wɔ Gibea, monhyɛn torobɛnto wɔ Rama!+ Monteɛm denneennen wɔ Bet-Awen;+ O Benyamin, di anim! 9 O Efraim, da a wɔbɛtwe w’aso no, nkurɔfo behu wo abɔ hu,+ Mama Israel mmusuakuw ahu nea ɛbɛba wɔn so ɔkwan biara so. 10 Yuda abirɛmpɔn te sɛ wɔn a wopiapia ɔhye.+ Mehwie m’abufuw agu wɔn so te sɛ nsu. 11 Wɔahyɛ Efraim so, na wɔabu no atɛn ama wabubu,Efisɛ osii ne bo sɛ obedi ne tamfo akyi.+ 12 Enti meyɛe sɛ nwewemmoa maa Efraim,Na meyɛe sɛ ɔporɔw maa Yuda fi. 13 Bere a Efraim huu ne yare, na Yuda huu ne kuru no,Efraim kɔɔ Asiria,+ na ɔsoma kɔɔ ɔhenkɛse bi nkyɛn. Nanso wantumi ansa mo yare,Na wantumi amma mo kuru no anwu. 14 Na mɛyɛ sɛ gyata a ogyina ne nan so ama Efraim,Na mɛyɛ sɛ gyata* a ne ho yɛ den ama Yuda fi. Me ara mɛtetew wɔn mu na makɔ;+Mede wɔn bɛkɔ, na obiara rentumi nnye wɔn.+ 15 Mɛkɔ, mɛsan akɔ me tenabea akosi sɛ wobetwa wɔn bɔne so aba,Na wɔbɛba abɛhwehwɛ m’anim dom.*+ Sɛ ebi kã wɔn ani a, wɔbɛhwehwɛ m’akyi kwan.”+
^ Anaa “asau.”
^ Anaa “wɔn a wɔatew atua.”
^ Ebetumi akyerɛ mmoa anaa nnipa a wokunkum wɔn.
^ Anaa “mɛteɛ wɔn nyinaa so.”
^ Anaa “ɔbrabɔne.”
^ Anaa “nsaase.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Wɔbɛmene wɔn bosome baako mu.”
^ Anaa “gyatanini.”
^ Nt., “m’anim.”